admin · Mey 2011 · Global Voices teny Malagasy
admin · Mey, 2011
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Mey, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Mey 2011
Herinandro lasa izay, renim-pianakaviana saodiana iray nitondra ny fiarany nandeha nanatitra ny zanany tany an-tsekoly any Jeddah. Tamin'ny 22 may 2011, vehivavy Saodiana iray hafa, Manal Al-Sharif, nitondra fiara koa niaraka tamin'ny vehivavy mpitolona ho an'ny zon'ny vehivavy saodiana, Wajeeha Al-Huwaider, teo akaikiny, ny anadahiny sy ny zanany lahy tokana. Ny...
Iran: “Eny rehetra eny izahay” fanentanana hanoherana ny tsy fankasitrahana pelaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Mey 2011
Arsham Parsi no mpanorina ny Fikambanan'ny Pelaka Iraniana manana ny foibeny any Toronto, Canada. Tamin'ny 2008, niteny tao amin'ny Global Voices izy fa “fanomezana tsara ho azy ireo ny aterineto.” Tamin'ity taona ity, tamin'ny 17 may, Andro Iraisam-pirenena hitsipahana ny tsy fankasitrahana pelaka,Iraniana maro no nampiasa ity “fanomezana” ity hanandratana indray ny...